Ku noolaanshaha Heerka 4 | Living at Level 4 | Unite against COVID-19
Heerka Digniinta 4 waa inaad:
joog guriga marka laga reebo dhaqdhaqaaqa gaarka ah ee lama huraanka ah
joogtey dadka ku daryeelka inay gaar kuu yihiin. Waa muhiim in la ilaaliyo qof kasta oo ku jira dadka aad la kullanto
u jirso ugu yaraan 2 mitir dadka aanad badanaa la kulmin marka guriga looga baxayo dhaqdhaqaar gaar ah oo lama huraan ah
joog aagaaga maxaliga ah si aad u jimicsato
wax ka iibso aagaaga maxaliga ah
ka shaqee oo wax ka baro gurigaaga. Shaqaalaha qaarkood waxay sii wadi karaan inay tagaan shaqada laakiin waxaa jira xayiraado darran oo tan saaran.
xidho daboolka wejiga gaadiidka dad waynaha iyo meelaha laga safro, duulimaadyada, gudaha tagsiyada ama baabuurta lawada kiraysto raacidooda, xaga xarumaha caafimaadka iyo ganacsiyada weli furan. Waxaa lagu talinayaa inaad xidhato mid marka kala fogaanshaha jidhku uu adag yahay.
dhaq oo u qalaji gacmahaaga si caadi ah. Waa muhiim inaad isticmaasho tallaabooyinka fayo dhowrka aasaasiga ah, ay ku jiraan dhiqida gacmahaaga, ku qufaca ama ku hindhiska suxulkaaga iyo nadiifinta oogooyinka si caadi ah.
Raad raac halka aad joogtay addoo isticmaalaya abka Raad raaca NW COVID, buug yaraha raad raaca COVID-19, ama qoraalo qoran. Tani waxya caawisaa xidhiidhka raad raaca degdega ah haddii loo baahdo.
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan fayraska COVID-19 iyo astaamaha
Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan Baadhitaanka
Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan raad raacida Bluetooth
Is tallaal haddii aad ballan leedahay
Weli waxaad ka qaadan kartaa tallaalkaaga Digniinta Heerka 4 haddii aad ballan leedahay. Xarumaha tallaalka way furmi doonaan. Waxay ku hawl geli doonaan si waafaqsan xayiradaaha Digniinta Heerka 4. Waxaanu dhiirin gelinaynaa adigu inaad isku tallaalsho sida la qorsheeyay.
Xidho Daboolka Wejiga
Xaga Digniinta Heerka 4, daboolada wejiga sharci ahaan waa in la xidhaa:
guudka gaadiidka dad waynaha iyo xaga xarumaha laga safro, tusaalahaan istaanada tareenada iyo meelaha basku joogsado
marka aad booqanayso xarumaha daryeelka caafimaadka
xaga ganacsiyo kasta ama adeegyada weli furan oo ku lug leh xidhiidhka macmiilka, ay ku jirto dukaanada subarmaarkadka, farmasiiyada iyo kaalmaha shidaalka.
Xidhashada daboolada wejiga sidoo kale waxaa la dhiirigeliyaa markasta oo aad ka baxdo gurigaaga.
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan masgarooyinka iyo daboolada wejiga
Socodka la ogolyahay ee Alert Level 4
Safarka Alert Level 4 way xadidantahay, marka laga reebo sababaha la ogolaaday ee hoos lagu tilmaamay. Haddii aad u safreysid mid ka mid ah sababaha la ogolaaday, uma baahnid qaab kaloo ansixinta lagu safro. Laakin waa inaad wadato qaar ka mid ah cadeynta sababtaada aad ku safartid.
Haddii aad aastaamo COVID-19 aad leedahay, aad u dhawaatay qof laga helay COVID-19 ama lagaa helay baaritaanka COVID-19, waa inaadan safrin – xitaa haddii laguu ogolaado – oo waa inaad is gooniyeysaa, oo aad soo wacdaa Qadka caawinta wixii tallo oo isbaar.
Ma ubaahan tahay taageero?
Haddii ay dhibaato kaa haysato lacagta, cuntada, fayo qabkaagadhimirka ama jidha waxa uu kuu noqon karaa taageero.